Dhibcaha Xogta ee Ku guuleyste Ganacsi Super Bowl oo layaab leh | Martech Zone
Xayeysiimaha ugu wax ku oolka badan ee loo yaqaan 'Super Bowl' ma noqon karaan kuwa aad u maleyneyso. In kasta oo awooddayada ururinta xogta ay sii kordheyso, haddana awoodda aan u leenahay in aan ku fahamno xogta wali wey qabsanaysaa. At Faaruuq, kooxdeena saynisyahanada xogta waxay sameeyeen falanqeyn qoto dheer oo ku saabsan waxqabadka Twitter intii lagu jiray Super Bowl waxayna ogaadeen in xayeysiisyada ugu caansan aysan daruuri ahayn kuwa hela natiijooyinka ugu fiican. Sidoo kale, dhamaadka qodobkan waa aragti is-dhexgal ah ee xogteenna!
Dareen-celinta xun ee dareenka ayaa horseedda mug badan, laakiin shucuurta togan waxay dhalisaa hawlgal badan.
Dadka badankood hadda waxay yaqaanaan xayeysiinta caanka ah ee 'Nationwide' halkaasoo ay ku dilaan cunug dhamaadka. Go'aankan naxdinta leh ee aan caadiga ahayn wuxuu horseeday ficil weyn oo falcelin ah oo ku saabsan warbaahinta bulshada. Dhowr shirkado suuqgeyn ah ayaa horay u sii daayay inta badan tweeted natiijooyinka muujinaya Qaranka oo dhan sida guuleystaha, laakiin waxaan ahayn shaki.
Fikirkeennu waa in kastoo jawaabta diidmada ahi ay horseedayso tweets badan, haddana malaha nooca nashaadnimada ee waddanka oo dhami runtii doonayo. Ugu dambeyntiina, waxay u badan tahay inay tahay shirkadda Microsoft guuleystay baraha bulshada intii lagu jiray Super Bowl.
Sidee Daraasadu u shaqeysay
Ugu horreyntii, waxaa jiray in ka badan 28.4 milyan oo tweets caalami ah intii ciyaartu socotay. Adeegyaasheena ingest ayaa soo qabtay qiyaastii 9 milyan oo ka mid ah kuwa daraasaddan. Waxaan u maleyneynaa in taasi ay tahay cabir muunad fiican, ku saabsan 32%.
The Faaruuq daraasaddu way ka duwan tahay qof walba elses taas oo aan ka soo qaadanayno DHAMMAAN tweets, oo aan kaliya ahayn kuwa ku xidhan xisaabaadka xayeysiistayaasha. Tani waxay ka dhigan tahay inaan hayno macluumaad ka badan inta aad ka soo jiidan karto Twitter API.
Waxaan ka soo saarnay xogta tweets laba siyaabood, adoo adeegsanaya labadaba luqadda dabiiciga ah sidoo kale toos ah @ rasmiga ah ee Twitter. Tusaale ahaan, isbarbardhigga dhammaan tweets iyo mcdonald ku habboon dhammaan noocyada (w / o xaraf weyn ama jamac) iyo @McDonalds.
Waxaan ku socodsiinay dhammaan tweets iyada oo loo marayo wax loo yaqaan falanqaynta dareenka kaas oo adeegsanaya algorithms si loo go'aamiyo haddii tweet uu yahay mid togan ama mid xun (Polarity), iyo sidoo kale xaqiiqo ama ra'yi (Subjectivity).
Waxaan u soo diyaarinay liis _____ ugu badan inta badan tweeted, dareenka ugu badan, Iyo celceliska ugu badan.
Mid kasta hoostiisa ugu shay, waxaan ku taxnay 10ka retweets ee ugu sareeya si aan muuqaal ahaan u xaqiijin karno taraafikada shay kasta uu haysto ay ahayd.
Nambarada ceyriin - Noocyada ay ku qoran yihiin Volume
Bandhigga A - Ku muujinta qoraallada ugu badan ee "luqadda dabiiciga ah"
Bandhigga A, waxaan marka hore dooneynaa inaan ogaano McDonalds won mugga saafiga ah. Si kastaba ha noqotee, saynisyahannadeena xogta waxay xuseen in la galo Super Bowl, McDonalds horeyba wuxuu u lahaa taraafiko aad u sarreeya.
Markaa hagaajinta saldhigga taraafikada ciyaarta kahor, Nationwide waxaa lagu tirin karaa guuleystaha mugga ganacsigooda.
Sidoo kale Exhibit A waxaad arki kartaa in u dhow Nationwide ay tahay Skittles, Pepsi, iyo Doritos. Microsoft runti way ka fog tahay liiska, markaa waxaad la yaabi kartaa xilligan; maxaan ugu maleyneynaa in Microsoft guuleysatay? Hagaag, taasi waa sababta oo ah waxaa jira kala goyn BIG ah oo udhaxeeya sida dadku u hadlaan, iyo habka ay u shaqeyso warbaahinta bulshada.
Kaqeybgalka iyo Wadahadalka
Si ganacsigu ugu rogo tweet-ka wax la taaban karo, waa inuu jiraa fal nooc uun ah. Wixii Twitter ah, ficilada ugu cad cad waa:
Wax dib u qor
Raac xisaabta ganacsiga
Guji xiriiriyaha ku jira tweet-ka
Marka waxaan dib u eegnay xogta si aan u ogaano cida wax badan heshay tallaabooyinka laga bilaabo mugooda Twitter-ka iyo 5-ta sare waa:
@McDonalds (mar labaad, waxay horeyba u ahaayeen mug weyn)
@Had iyo jeer
Marka halkan waxaad ku aragtaa Microsoft oo horeyba uga sii fiicnaaday waddanka oo dhan dhab ahaantii helitaanka ficillada ugu badan. Waxaan sidoo kale sameynay kormeer muuqaal ah oo ku saabsan URL-yada sare ee durdurrada Twitter-ka, Microsoft-na waxay leedahay xiriiriyeyaasha ugu badan ee dib ugu noqonaya goobahooda. Laakiin waxa ku saabsan dareenka? Kumaa jacaylka ugu badani ka helayaa Twitter-ka?
Dareen wanaagsan iyo dareen taban
Bandhigga B - Xisaabaadka iyo raadinta luqadda dabiiciga ah ee ugu sarreysa ayaa loo qaabeeyey iyadoo loo eegayo sida loo kala qaybsamo (mid togan ama mid taban) iyo mawduuc (xaqiiq ama fikrad).
Bandhigga B, waxaad ku arki kartaa dhammaan @cocountsyada iyo raadinta luqadda dabiiciga ah ee ugu sareysa khariidad ahaan iyadoo la raacayo qiyaasta (togan ama taban) iyo mawduucyada (xaqiiqda ama ra'yiga). Calaamadaha ugu wanaagsan ayaa ahaa @skechersusa, @bmw, Iyo @wix. Calaamadeena ugu xun waxay ahaayeen victorias qarsoodi ah, t-mobile, iyo-layaab maleh dalka oo dhan. Marka waxaad si cad u arki kartaa in inta badan taraafikada waddanka oo dhan ay ahaayeen kuwo taban.
Markaad leedahay mug sare, McDonalds iyo Microsoft waxay ahaayeen kuwa ugu sarreeya. Tani waxay ka dhigan tahay inaysan kaliya helin gaadiid badan, laakiin wadahadalka ayaa inta badan wanaagsan.
Marka hadaad isku darto dhamaan, Microsoft waa mida kaliya tartanka ugu sareeya oo sifiican uga dhex shaqeeya sedexda cabir: mug, hawlgal, iyo dareen.
Dabcan, waxaanan dooneynaa in tan ay caddaato, halka aan u maleyneyno in Microsoft ay ku guuleysatay tartankii ganacsi ee Super Bowl; McDonalds wuxuu umuuqdaa inuu ku guuleysto baraha bulshada, waqtiga oo dhan.
Godka iyo Siraha
Intii aan jiidanay farriimo badan, ma ahayn DHAMMAAN iyaga. Xogtaan qaarkeed way isbadali karaan hadaan eegayno 100%.
Ilo kale ayaa Budweiser saaray meesha ugu sareysa liiska, mana heli karno sabab aan ku sababeyno. Ma garanayno sababta khilaafku, laakiin waxaan dooneynay inaan qirno.
Khadkeena-aasaasiga ah ee loo yaqaan 'McDonalds' laguma saarin muuqaalkeenna muuqaalka ah maxaa yeelay maynaan lahayn aasaas aasaas u ah qof walba. McDonalds wuxuu si fudud u muujiyey buzz aad u weyn oo ciyaarta gelaya waxaan ku qasbanaanay inaan ku soo koobno ​​gabagabadayada.
@xDayaannax iyo @caawiye waxay lahaayeen dhagaystayaasha ugu badan ee kuxiran iyaga oo tifaftarkooda arkaya dareenka ugu badan-ee-tweet-ka.
Maanaan qaban #LikeGirl kaas oo ahaa hashtag caan ah (xumaantayada). Si kastaba ha noqotee, daraasado kale ayaa muujinaya inaysan wali gaarin mug si ay saameyn ugu yeeshaan natiijooyinkeena.
Ku saabsan Perscio
Faaruuq ma wehelkaaga ganacsiga ayaa diirada saaraya abuurista fursado Xog Weyn. Xirfadeena gaarka ah waxay noo ogolaaneysaa inaan kala qaadno farqiga u dhexeeya adduunka farsamada ee Xogta Weyn iyo dhinacyada la taaban karo ee istiraatiijiyadda ganacsiga. Waxaan kula shaqeyneynaa si aan u qeexno istiraatiijiyad, xulashada alaabada, hirgelinta xalalka iyo dhisida aqoonta urureed ee falanqaynta iyo aragtida xogta. Wax dheeri ah baro oo soo dejiso waraaqdeena cad, Waxaa jira Dunida Weyn ee Xogta Halkaas.
Tags: had iyo jeerganacsiga ugu fiicanganacsiga superbowl ugu fiicanxog weynBMWLexusMcDonald eeMicrosoftdalka oo dhandareenfalanqaynta dareenkaqalfoofleydaxaraashkafalanqaynta bulshadawarbaahinta bulshadaiyo maddiibad supersuper baaquli ganacsiqurux badanTwitterwix